Ederede Ashwini Dave na Martech Zone |
Edemede site na Ashwini Dave
Site na ọbịbịa nke ntụle azụmaahịa, nyocha ịntanetị, na mgbasa ozi mmekọrịta, ọrụ nkwado ndị ahịa ụlọ ọrụ gị dị ugbu a na aha aha gị na ahụmịhe ndị ahịa gị n'ịntanetị. N'ikwu eziokwu, ọ baghị uru etu mbọ mbọ azụmaahịa gị siri ma ọ bụrụ na ịkwado nkwado na ahụmịhe gị. Akara maka ụlọ ọrụ dị ka aha mmadụ. Na - enweta aha gị n ’ime ihe siri ike ike. Jeff Bezos Ndi ahia gi na nke gi